Matare CNC Router
4 akabatana CNC router Machine 1 ...
3 Sekaiichi 4 akabatana 6090 CNC Rout ...
CNC router Machine 1530 zvaiti ...
DADI CNC router muchina 132 ...
Mini Fiber Laser Chichatara Ma ...
China-Axis CNC Machining Center (Rotary Spindle)
Zvinhu: 1. Welded ne thickend skirhubhu, DA 1325ATC R ndeye 4 axis ATC CNC Router iyo spindle inogona kukwira 0-180 degrees; Japan inozivikanwa dumer kutsigirwa svumbunuro inogona kutenderera mushe; 2. Yaskawa servo motors uye mutyairi, Taiwan mutsara wekutarisira njanji uye kuendesa kunze kweiyo rack inoona kuti muchina unokurumidza kumhanyisa uye kurongeka, kutakura kukuru kwekuremerwa, kutwasuka uye kwakaringana kutumira, ruzha ruzha, uye nguva yakareba ichishanda; 3. Taiwan Syntec kutonga system - Easy kushanda, rutsigiro kushanda kunze kwemhepo ....
Woodworking CNC Kucheka uye Kudhina Machine T4
Maitiro: 1. zvina spindle inogona kushandurwa otomatiki uye yakatsiviwa nezvishandiso zvakasiyana. Mapepa maviri akasimba-simba anokonzeresa kusavhara uye kuhukura kana zvinhu zvavhurwa, uye zvimwe zviviri zvimedu zvinokonzeresa kudhiraivha .Pamusuwo wedare remakurukota uye gonhi rekutsvedza parinenge riine chimiro, zvimedu zvina zvinobva zvangogadziriswa necylinder kuenda. zadzisa iyo pateni yakanyorwa mukati mezvishandiso zvina. Inokodzera kugaya, yekucheka uye kudhiza yakagadzirirwa kugadzira maitiro ekugadzira, ...
Zvinhu: 1. Welded ne thickend skirhubhu, DA 1325ATC inyanzvi imwe yeATC huni CNC yekuveza muchina iyo ine carousel mhando chishandiso magazini. 2. Yaskawa servo motors uye vatyairi, Taiwan mutsara gwara njanji 30mm uye yekungenisa rack kuendesa inoona muchina uchimhanya nekukurumidza uye kurongeka, kutakura kukuru kwekuremerwa, kutwasuka uye kwakaringana kuendesa, ruzha ruzha, uye nguva yakareba ichishanda; 3. Taiwan Syntec kutonga system - Easy kushanda, rutsigiro kushanda kwemaitiro. Mhepo inotonhorera spindle 9KW ATC, yakanaka-kno ...